Iinqwelomoya ezingakumbi eziya eLondon, eKyiv naseIstanbul kwiAir Astana ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezingakumbi eziya eLondon, eKyiv naseIstanbul kwiAir Astana ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba eziUkreqa zaseUkraine • Iindaba ezahlukeneyo
U-Air Astana ubhengeza ukwanda kokuhamba okuya eUkraine naseTurkey, kwaye iqala kwakhona iinqwelomoya zaseLondon.
Umoya i-Astana inyusa ii-frequency ze-Istanbul.
U-Air Astana wongeza ngaphezulu kweenqwelo moya zeKyiv.
I-Air Astana iphinda iqale ngqo kwiinqwelomoya zaseLondon ezivela eNur-Sultan.
I-Air Astana yazisa ngesantya esongeziweyo phakathi kweKyiv neNur-Sultan ngolwesiBini, nge-7 kaSeptemba 2021, kunye namakomkhulu aseKazakhstan naseUkraine ngoku axhumene kathathu ngeveki ngeMivulo. NgoLwesibini nangooLwezine. I-airline ikwasebenza ngeenqwelomoya phakathi kweKyiv neAlmaty ngoLwesithathu, ngeMigqibelo nangeeCawa.
U-Air Astana uza kongeza ukumiliselwa kwesantya sesithathu phakathi Istanbul kunye neAlmaty nge-17, ngoSeptemba 2021, ngenqwelomoya ngeLwesibini, ngolwesiHlanu nangeeCawa, kunye nenkonzo phakathi kweIstanbul neNur-Sultan ngoLwesine.
Inzululwazi yasemoyeni iphinda iqale ngqo kwiinqwelomoya ukusuka eLondon ukuya eNur-Sultan kabini ngeveki ngoLwesithathu nangoMgqibelo ukuqala nge-18 kaSeptemba 2021.
Bayacelwa abakhweli ukuba balandele iimfuno zokungena ngaphambi kokuba babhabhe kwiAir Astana website.
U-Air Astana ngumphathi weflegi yaseKazakhstan, ese-Almaty. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo, zasekhaya nezamazwe aphesheya kwiindlela ezingama-64 ezisuka kwindawo yayo ephambili, kwisikhululo seenqwelomoya iAlmaty, nakwiziko laso lesibini, kwisikhululo senqwelomoya saseNursultan Nazarbayev.